ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » နိုင်ငံတကာသတင်းများ » ဂျမေကာသတင်းထူးများ » ဂျမေကာ- အထူးလေ့ကျင့်ရေး ကိစ္စလေ့လာမှု
နိုင်ငံတကာသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • စီးပွားရေးခရီးသွား • ကာရစ်ဘီယံ • ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ • ဂျမေကာသတင်းထူးများ • သတင်း • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ
ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီး Hon. Edmund Bartlett (ဘယ်) သည် အမြန်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အတွက် International Sales ၏ Vice President၊ American Hotel & Lodging Educational Institute (Ahlei) Ed Kastli နှင့် တွေ့ဆုံမှုကို ခဏရပ်လိုက်သည်။ အဆိုပါ အခါသမယသည် ယနေ့အစောပိုင်းတွင် စပိန်နိုင်ငံ၊ မက်ဒရစ်မြို့၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဂျမေကာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ရေးကိစ္စလေ့လာချက်တစ်ရပ်ကို ထုတ်ပြန်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ Jamaica Centre of Tourism Innovation (JCTI) နှင့် လက်တွဲပြီး လွန်ခဲ့သော လေးနှစ်ကတည်းက စတင်ခဲ့သည့်အတွက် ဂျမေကာခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် 8,000 ကျော်ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
AHLEI ၏ International Sales ၏ဒုတိယဥက္ကဌ Ed Kastli နှင့်ယနေ့အစောပိုင်းက Madrid တွင်တွေ့ဆုံမှုတွင်၎င်းကိုကြေငြာခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ခရီးသွားလုပ်သားများအတွက် အလုပ်အကိုင် ၁ သန်းခန့် စျေးကွက်ဖွင့်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်း ၀န်ကြီး Bartlett က ပြောကြားရာတွင် ဂျမေကာသည် ခရီးသွားကဏ္ဍတစ်လျှောက် လူသားအရင်းအနှီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆက်လက်အာရုံစိုက်နေသောကြောင့် ဤပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် တန်ဖိုးရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
"AHLEI သည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ထမ်းများနှင့် ခရီးသွားဧည့်သည်များ၏ လုံခြုံမှုနှင့် လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်အတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မျှဝေထားသော ဟိုတယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်များအတွက် 19 ခုနှစ် မတ်လတွင် COVID-2020 လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ပရိုတိုကောများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်" ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
JCTI သည် ခရီးသွားလာရေး မြှင့်တင်ရေး ရန်ပုံငွေ (TEF) ၏ အများပိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ကြီးဌာန. JCTI သည် ဂျမေကာနိုင်ငံ၏ အဖိုးတန်လူ့စွမ်းအားအရင်းအနှီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ခရီးသွားကဏ္ဍအတွင်း ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် တာဝန်ပေးအပ်ထားသည်။
“ခရီးသွားလုပ်ငန်းက အဓိကပါ။ ဂျမေကာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး. ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အများပြည်သူဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပရိုဂရမ်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ အဓိကပန်းတိုင်တစ်ခုမှာ ဂျမေကန်လူမျိုးများ၏ လူနေမှုဘဝ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးရန်ဖြစ်သည်” ဟု ဝန်ကြီး Bartlett က ပြောကြားခဲ့သည်။